Uyini umehluko phakathi kwama-air conditioner nama-air coolers? | Lianchuang
Ama-air conditioner amathuluzi wokupholisa asetshenziswa kakhulu ehlobo. Ngokuvamile zilungisiwe. Ukuze kube lula, kunama-air conditioner angamaselula nama-air conditioner emakethe, futhi akukho nokukodwa okulungisiwe. Ngakho-ke uyini umehluko phakathi kwama-air conditioners eselula nama-air conditioners?
1. Yini i-air conditioner ephathekayo?
Isiphephetha-moya esingumahamba nendlwana yisipholisi esingahanjiswa ngokuthanda. Kukhona ama-compressors, abalandeli be-exhaust, ama-heater kagesi, ama-evaporator, ama-condensers apholile emoyeni namanye amadivayisi emzimbeni. Umzimba ufakwe ipulagi yamandla kanti isisekelo se-chassis sinama-casters. iselula. Ukubukeka kuyimfashini, kukhanya futhi kuyingqayizivele.
2. Yini umoya opholile?
Isipholisi somoya siwuhlobo lwensiza yasendlini enefenisha nemodi yokupholisa umoya. Inemisebenzi eminingi njengokuhlinzekwa komoya, ifriji, kanye ne-humidification. Isebenzisa amanzi njengomthombo, ingathumela umoya obandayo ngaphansi kwezinga lokushisa lekamelo noma umoya ofudumele. Iningi lokupholisa umoya linezihlungi zothuli zokuhlunga umoya. Uma kukhona ungqimba lwe-photocatalyst kusihlungi sothuli, futhi singaba nomphumela wokuvala inzalo.
Okwesithathu, umehluko phakathi kwama-air conditioner angamaselula nomoya opholisa umoya
1. Isiphephetha-moya esinemodeli encane nevolumu, futhi sinesitayela futhi siyaphatheka. Isiphephetha-moya esingumakhalekhukhwini siwuhlobo lwesiphephetha-moya esihamba ngendlebe esidabula umqondo wendabuko wokuklama, sincane, sinamandla aphezulu okusebenzisa amandla, umsindo ophansi, asidingi ukufakwa, futhi singabekwa ezindlini ezahlukahlukene ngokuthanda.
2. Isipholisi somoya sisebenzisa amanzi njengesisetshenziswa futhi singaletha umoya obandayo ngaphansi kwezinga lokushisa ekamelweni noma umoya oshisayo nonomswakama. Uma kuqhathaniswa nabalandeli bakagesi, izipholisi zomoya zinemisebenzi yomoya omusha nokususa iphunga. Izipholisi zomoya azikwazi ukuvimbela kuphela imitha kagesi ekukhubekeni, kepha futhi zinomuzwa opholile noqabulayo.
Okwesine, okungcono, umoya opholisa umoya noma opholisa umoya
1. Ama-cooler air anganciphisa izinga lokushisa cishe ngama-5-6 degrees kunabalandeli abajwayelekile, abe namandla aphansi okusetshenziswa, angabi nawo umsebenzi wokuqeda amandla omuntu, futhi andise umswakama womoya lapho esetshenziswa, ofaneleka kakhulu ezindaweni ezinesimo sezulu esomile. Umphumela wokulungiswa kwamazinga okushisa ucishe ufane nowama-conditioner wendabuko wendabuko. Ngokusobala ingalungisa ukushisa komoya wasendlini, futhi ingalungiswa emazingeni okushisa ahlukahlukene njengoba kudingeka. Kodwa-ke, ngemuva kokusetshenziswa, izinga lokushisa langaphakathi endlini alilingani, okulula ukudala ukungaphatheki kahle nezifo zokupholisa umoya. Ngasikhathi sinye, amandla makhulu futhi ukusetshenziswa kwamandla kukhulu.
2. Isiphephetha-moya esingumahamba nendlwana silungele ukusebenza ehhovisi, ngaphandle nakwezinye izindawo zomphakathi. Ukusetshenziswa kwamandla nentengo yama-air conditioner eselula kuphakeme kakhulu.